बढ्यो कुवेती दिनार र युके पाउण्डको भाउ, हेर्नुहोस् कुन देशको विनिमयदर कति ? Canada Nepal
तीन वर्ष पनि नटिकेको ओली–प्रचण्डको राजनीतिक प्रेम
बढ्यो कुवेती दिनार र युके पाउण्डको भाउ, हेर्नुहोस् कुन देशको विनिमयदर कति ?
काठमाडौं । सोमबार अमेरिकी डलरको विनिमयदर स्थिर रहेको छ भने अन्य केही देशका विनिमयदर बढेको छ ।
आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय १९ रुपैयाँ २८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय १९ रुपैयाँ ८८ पैसा तोकिएको छ । यस्तै एक अस्ट्रेलियन डलरको खरिददर ९० रुपैयाँ ९२ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ९१ रुपैयाँ ३७ पैसा रहेको छ ।
एक युरोको खरिददर १ सय ४१ रुपैयाँ ९२ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर १ सय ४२ रुपैयाँ ५३ पैसा रहेको छ । एक मलेसिया रिंगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ ८५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ९९ पैसा तोकिएको छ ।
एक साउदी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ९६ पैसा तोकिएको छ । एक कतारी रियालको खरिददर ३२ रुपैयाँ ७५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३२ रुपैयाँ ९२ पैसा तोकिएको छ ।त्यस्तै एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ९५ रुपैयाँ २३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ९७ रुपैयाँ २२ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ ६४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ ६९ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै बहराइन एकको खरिददर ३ सय १६ रुपैयाँ ३८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर ३ सय १७ रुपैयाँ ९८ पैसा तोकिएको छ ।
एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ६३ रुपैयाँ ५१ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ६४ रुपैयाँ ३४ पैसा तोकिएको छ। त्यस्तै जापानी यनको खरिददर १० रुपैयाँ ८८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १० रुपैया ९३ पैसा तोकिएको छ ।
चैत्र ३०, २०७७ सोमवार ११:०७:१४ बजे : प्रकाशित
बढ्यो युके पाउण्ड र कुवेती दिनारको भाउ, हेर्नुहोस् कुन देशको विनिमयदर कति ?
काठमाडौं । सोमबार अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहेको छ भने अन्य देशको विनिमयदर केही घटबढ भएको छ ।
आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय १६ रुपैयाँ ९६ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय १७ रुपैयाँ ५६ पैसा तोकिएको छ । यस्तै एक अस्ट्रेलियन डलरको खरिददर ९० रुपैयाँ ९२ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ९० रुपैयाँ ३९ पैसा रहेको छ ।
एक साउदी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ १९ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ३५ पैसा तोकिएको छ । एक कतारी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ६१ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ ७८ पैसा तोकिएको छ ।
एक युरोको खरिददर १ सय ४२ रुपैयाँ १ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर १ सय ४२ रुपैयाँ ७४ पैसा रहेको छ । एक मलेसिया रिंगिटको खरिददर २८ रुपैयाँ ३५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २८ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर १० रुपैयाँ ३८ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर १० रुपैयाँ ४४ पैसा तोकिएको छ । एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १ सय ६४ रुपैयाँ ९४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय ६५ रुपैयाँ ७९ पैसा तोकिएको छ।
त्यस्तै जापानी यनको खरिददर १० रुपैयाँ ७० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १० रुपैया ७५ पैसा तोकिएको छ ।
एक बहराइन दिनारको खरिददर ३ सय १० रुपैयाँ २५ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ११ रुपैयाँ ८४ पैसा तोकिएको छ। एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ८८ रुपैयाँ ७० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ९० रुपैयाँ ६९ पैसा तोकिएको छ।
जेठ ३, २०७८ सोमवार १०:३९:१३ बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - सोमबार पनि नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ । आइतबार तोलामा ९ सय रुपैयाले बढेको सुनको मूल्य आज तोलामा ३ सय रुपैयाले बढेको हो ।
आइतबार तोलाको ९२ हजार ५ रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज तोलामा ३ सय रुपैयाले बढेर तोलाको ९२ हजार ८ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य प्रतितोला ९२ हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको थियो । त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि बढेर तोलाको १ हजार ३ सय ५५ रुपैयामा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ ।
जेठ ३, २०७८ सोमवार ११:४०:१० बजे : प्रकाशित